China Disposable PVC magurovhinzi Gadzira uye Fekitori | Zhongmaohua
Dispacksable PVC magurovhosi
Anogadzika magurovhosi ePVC ndiwo magurovhosi epurasitiki akaraswa, ayo ari zvigadzirwa zvinokurumidza kukurumidza muindasitiri yekudzivirira. Vashandi vezvokurapa nevashandi vemuindasitiri vekudya vanoziva chigadzirwa ichi nekuti magurovhosi ePVC anogadzikana kupfeka, anoshandisika kushandisa, haana chero zvakasikwa latex zvisanganiswa, uye hazvizokonzeresa zvinopesana.
Chigadzirwa kugadzira maitiro
Kuongorora kwezvinhu zvakasviba → kushandiswa kweshoko → kusimudzira → kuongorora .. kuchera .. kuchenesa kuchengetedza → kuongorora → pa-line kushandiswa → kudhonza → kudhonza st kuchenesa oma ..plastiki kuumbwa .. kupisa kupukuta uye kutonhorera → kumisikidzwa kwePU kana poda nyoro → kudonhedza → kuoma → Hemming → Kutungamira kusunungurwa → Kutaridza → Kuverengera → Kuongorora → Kugovera → Kuchengeta .. Kuendesa Kunotumira → Kuisa uye Kutakura.
Scope uye mashandisiro
Mabasa epamba, zvemagetsi, zvemakemikari, zvemumvura, girazi, chikafu uye kumwe kudzivirirwa kwefekitori, zvipatara, kwesainzi kutsvakwa uye mamwe maindastiri; anoshandiswa zvakanyanya mukumisikidzwa kwemasiconductors, echokwadi zvigadzirwa zvemagetsi uye zviridzwa uye mashandiro esimbi anonamira midziyo, yakakwirira-tech chigadzirwa kuisirwa uye debugging Disc dhiraivha, michina yemidziyo, LCD inoratidzwa metres, wedunhu bhodhi kugadzirwa mitsara, optical zvigadzirwa, maLabhoratri, zvipatara, salons uye mimwe minda.
Dispacksable PVC magurovhosi (3 mafoto)
Nzvimbo dzakachena dzakadai semiconductors, microelectronics, LCD inoratidza uye zvimwe zvinhu zvakaomarara zvinhu, zvekurapa, zvemishonga, zvebiinjiniya zvekudya, chikafu uye chinwiwa, nezvimwewo.
1. Inonyaradza kupfeka, kupfeka kwenguva refu hazvizokonzeri kunetseka kweganda. Inobatsira kuyerera kweropa.
2. Izvo hazvina maamino macomputer uye zvimwe zvinhu zvinokuvadza, uye hazviwanzo kukonzera allergies.
3. Simba rakasimba rekusimbisa, kurwisa kupinza, uye kwete nyore kuputsa.
4. Kuisa chisimbiso kwakanaka, kunonyanya kushanda kudzivirira guruva kuti risapukunyuke kunze.
5. Yakanakisa kemikari kurwisa uye kuramba kune vamwe pH.
6. Silicone-isina machipisi, ine zvimwe antistatic zvivakwa, yakakodzera kune zvigadzirwa zvekugadzira zveindasitiri yemagetsi.
7. Iyo yepasi yemukati makemikari anosara, pasi pezvinhu zve ion, uye zvidiki zvidimbu zvemukati, yakakodzera yakasimba yakachena mukamuri nharaunda.
Ichi chigadzirwa hachina kuruboshwe uye ruoko rwerudyi maoko, ndapota sarudza magurovhosi akakodzera ruoko rwangu mamiriro
Paunenge uchipfeka magurovhosi, usapfeka zvindori kana zvimwe zvinongedzo, terera pazvipikiri zvevatatu;
Ichi chigadzirwa chinogumira pane imwe-nguva yekushandisa; mushure mekushandiswa, ndokumbirawo utore svina yekurapa kuti udzivise hutachiona kubva pakusvibisa nharaunda;
Izvo zvakanyatsorambidzwa kuisa zvakananga kudiridza yakasimba mwenje senge mwenje wezuva kana ultraviolet rays.
Mamiriro ekuchengetedza uye nzira
Inofanirwa kunge ichichengeterwa munzvimbo inotonhorera uye yakaoma yekuchengetera (tembiricha yemukati iri pasi pemadhigiri makumi matatu uye unyoro hwehukama ingangodaro huri pasi pe80%) pasherufu 200mm kubva pasi.